Meydka Xildhibaan Aamino oo la keenay Muqdisho | KEYDMEDIA ENGLISH
Meydka Xildhibaan Aamino oo la keenay Muqdisho
Meydka Xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi, ayaa la keenay magaalada Muqdisho, halkaas oo la filayo in aas qaran loogu sameeyo.
MUQDISHO, Soomaaliya – Allaha u naxariistee, meydka Xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi, ayaa hadda salaadda Janaasada lugula tukaday garoonka diyaaradaha Muqdisho, kadib markii duhurnimadii maanta laga soo qaaday magaalada Baladweyne oo xalay lagu dilay.
Ra’iisul Wasaare Rooble, Madaxweynayaashii hore, Shariif iyo Xasan, Ra’iisul Wasaarihii hore, Kheyre, Madaxweynihii hore ee Galmudug, Guuleed, xildhibaanno, siyaasiyiin, culimo iyo shacab fara-badan, ayaa ka qeyb galay salaadda Janaasada, waxaana loo sameynayaa aas Qaran.
Sidoo kale, waxaa isna isla goobta janaasada lagula tukaday, oday dhaqmeedkii beesheeda oo xalay la socday, ahaana saxiixaha kursiga HOP#135, oo marxuumaddu ku fadhisay 10-kii sano ee la soo dhaafay, kaas oo dadaal xoogan ku bixiyay in kursiga aysan boobin Fahad iyo Farmaajo.
Xubno ka tirsan ehelkeeda, ayaa sheegay in ay maalmihii danbe la kulmeysay, hanjabaad dil, kadib markii Madaxweynaha Hirshabeelle, diiday inuu kursiga u xiro Cumar Faaruuq, oo Madaxtooyada Soomaaliya u doonayso inuu ku fariisto kursiga dhiigga leh.
Diblumaasiyiin caalami ah, Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Madaxweynayaashii hore, inta badan siyaasiyiinta mucaaradka iyo shacabka Soomaaaliyeed, ayaa si aan ganbasho lahayn u sheegaya in dilka AUN, Xildhibaan Aamino yahay mid siyaasadeed.
Dilka Allaha u naxariistee, Xildhibaan Aamino, ayaa lagu sifeeyay, mid u jeedkiisa ahaa in lagu aamisiyo cadaaladda, laguna daboolo kiiskii Ikraan Tahliil, isla-markaana lagu niyad jabiyo qof kasta oo u taagan ku adkeysiga mabaadii’da saxda ah.
Siyaasadda Farmaajo, waxa ay ku dhisan tahay, kala adkaansho iyo kala aarsi, mana ogollada inuu noolaado qof ka aragti duwan, wuuuna hore u khaarijiyay shaqsiyaad, ay ka mid ahaayeen, AUN, General Galaal, Ingineer Yariisow, Ikraan Tahliil iyo boqollaal kale.